Zvinhu: Aluminium, Sandblasting + Anodizing
Zvishandiso: Yepamberi CNC Lathe uye yekugaya michina
Certification: ISO9001 uye ROHS aiteerera
Zita reBrand: HUAYI
Pamusoro kurapwa: Sandblasting + Anodizing
Ruvara: Pingi, Bhuruu, Pepuru, Dema, Dzvuku
Chinhu: 2.5 x 2.5 x 1.8 inches
Usage: Zvetabacco, sora kukuya
Isu takaita kumwe kuvandudza kune chigadzirwa chinoita kuti yedu yekukuya ive iri nani kupfuura zvayaive pakutanga!
1. Chigadzirwa chedu chine mazino akapinza chaizvo ekugeda akaiswa zvakakwana kuti akunde mhando dzese dzemishonga, kubva pane yakareruka miriwo kusvika kune yakanyanya kutetepa ine zvishoma zvinomonyoroka zvishoma.
2. Yedu nyowani inobviswa mesh skrini yakadzika uye inokwana zvakakwana muchikamu chepasi. Yakanga yakanyatsogadzirirwa kubata zvimwe zvevhu zvinhu uye kugadzikana. Izvi zvinokutendera iwe kukuya mimwe miriwo kamwechete uye kukudzivirira kuti urege kuidurura uchivhura chikamu chepamusoro.
3. Yedu 2.5 "grinder yakavakwa zvakanaka grinder yakagadzirwa kubva kune rinorema basa aluminium alloy. Iyo yepamusoro mhando inoita kuti makamuri avhure zvakanaka uye nyore, mazino anogara achiramba akapinza uye zvichave nyore kuchenesa.
1. Inokodzera kukuya nekutyora masampuli ezvinyama zvakasiyana zvemiti, kusanganisira midzi, madzinde, mashizha, maruva, michero, mhodzi, nezvimwe.
2. Inokodzera kukuya nekupwanya kuitira kuongororwa nekuonekwa kwechikafu nemishonga yemishonga;
3. Inokodzera kupwanya kwakanaka uye kukuya kwakanaka kweyakaomarara, epakati-akaomarara uye akapwanya masampuli, uyezve inokodzera zvinhu zvakapfava, zvakasununguka uye zvine fibrous. Zvishandiso zvinogona kupwanywa uye pasi zvinosanganisira fibrous tishu, makemikari, mishonga, ivhu, sludge, michero yemiti, zviyo zviyo, mbeu yemafuta, mapurasitiki, marara, makushe, machira uye zvimwe zvakawanda zvinhu.
Mashoko Aluminium, Sandblasting + Anodizing
Zvishandiso Yepamberi CNC Lathe uye yekugaya michina
Chitupa ISO9001 uye ROHS aiteerera
Zita rekushandisa HUAYI
Surface kurapwa Sandblasting + Anodizing
Ruvara Pingi, Bhuruu, Pepuru, Dema, Dzvuku
Chinhu 2.5 x 2.5 x 1.8 inches
Kushandisa Zvetabacco, sora kukuya
Chii chinonzi Grinder?
Chigayo chigadziri chinogona kushandiswa kukuya zvidimbu zvakakora zvemabhureki e-cannabis muzvimedu zvinogona kushandiswa mumajoini. Vanokuya vanouya nenzira dzakasiyana, kubva kudiki uye zvakapusa kuenda kumidziyo ine matatu kana mana mafirita ekuwana Skuff.
Chigadzirwa ichi chine zvikamu zvinokwana pamwechete kuita chivharo chakatenderera chakavharwa. Iyo yepamusoro inowanzo kuve diki pane yepasi. Kune pini pamativi ese ari maviri mukamuri riya. Pini idzi dzinodzedzereka kuitira kuti dzisabatane kana zvikamu zvashandurwa zvatarisana.
Zvadaro: tsika logo kukuya